Android ဖိုင် Manager ကို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Android ဖိုင် Manager ကို
Android ဖိုင် Manager က APK ကို
ဤသည်အသုံးဝင်သော features တွေအများကြီးတင်ဆောင်အကောင်းဆုံးကိုအခမဲ့ဖိုင်မန်နေဂျာလျှောက်လွှာများ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ အားလုံးသင့်ဖိုင်များစီမံခန့်ခွဲရန်ရိုးရှင်းသော, အသေးစား, အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာ file ကိုစူးစမ်းရှာဖွေသူ။ အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို, ဗီဒီယိုများ, audio, စာရွက်စာတမ်းများ, apps များအပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားဖိုင်များစီမံခန့်ခွဲ။
★ လွယ်ကူသောဖိုင်မှတ်တမ်း browsing အတွက်: ညာဘက် File ကို Manager ကိုဖွင့် home screen ကနေအမျိုးအစားအလိုက်အလွယ်တကူဖိုင်တွေ Browse: ရုပ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, audio, applications များ, downloads, မကြာသေးခင်ဖိုင်တွေနဲ့စာရွက်စာတမ်းများ။
★ အပြည့်အဝအသားပေးဖိုင်မှတ်တမ်း Explorer ကို: cut, မိတ္တူ, ငါးပိ, delete, ဖန်တီး, အမည်ပြောင်း, ချုံ့, ထုတ်ယူ, ရှယ်ယာ, bookmark, ဖိုင်အသေးစိတ်ကို, ရှာနှင့်ပိုပြီး ...
★ စမတ်စာကြည့်တိုက်: FAT file system ကိုထောက်ခံကြောင်းနှင့်အတူ Access ကိုအားလုံးဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲကို USB OTG နှင့်တူသိုလှောင်မှုဆိုအမျိုးအစားကနေ EMMC, MMC ကားများ, SD ကဒ်, ပြည်တွင်း & ပြင်ပသိုလှောင်, ဖုန်းမှတ်ဉာဏ်, က USB သိုလှောင်, Flash ကို Drive ကို, ကလောင် Drive ကို။
★ root ဖိုင်မန်နေဂျာ: သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့အားလုံးအမြစ်ဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲ Access ကို (သင်ဖုန်းကိုဒီ feature ကိုအသုံးပြုရန်အမြစ်တွယ်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်) ။
★ File Transfer / ဝေမျှမယ်: PC ကိုမှသင့်ဖုန်းမှ FTP ကိုဆာဗာတွေနဲ့ဖိုင်တွေလွှဲပြောင်းပါ။ သင်တို့ကိုလည်းဘလူးတုသ်, wifi တိုက်ရိုက်နှင့်အခြားလူမှုရေးကွန်ယက် app များကို အသုံးပြု. သင့်ဖုန်းမှမည်သည့်ဖိုင်ကိုမျှဝေနိုင်ပါသည်။
★ စာရွက်စာတမ်းအယ်ဒီတာ: ပံ့ပိုးမှုထိုကဲ့သို့သောစတာတွေက HTML, XHTML က, TXT အဖြစ်စာသားကိုဖိုင်များကိုနီးပါးတိုင်းအမျိုးအစား
★ App ကို Manager က: မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူမျိုးစုံမလိုချင်တဲ့ applications များ uninstall နှင့် Backup တွေကိုယူပါ။
★ Task ကို Killer: quick task ကဘက်ထရီသက်တမ်းချောမွေ့ and save ဖုန်းကို performance ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကိုသတ်။
★ လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး: စကားဝှက်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဖိုင်တွေဝင်ရောက်ဖို့မည်သူမဆိုတားဆီး။
★ အရောင် Themes: app ကိုနှင့်ဆောင်ပုဒ်အမျိုးအစားများများအတွက်အများအပြားစိတ်ကြိုက်အရောင် themes များ။
ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကို (အပြည့်အဝဖိုင်မှတ်တမ်း Explorer ကို)
3.86 ကို MB
ဘလူးတုသ် file ကိုမန်နေဂျာများ Tools များ ဝိုင်ဖိုင်
မေလ 27, 2019 မှာ 6: 00 နံနက်
သင့်ရဲ့ website ကနေ software ကို download လုပ်ပါလို့မရပါဘူး။ အနည်းငယ်အကူအညီနဲ့ကျေးဇူးပြုပြီး download လုပ်ပါနည်း။ အကြှနျုပျ၏ Android ဖုန်း powered ။
Ochan Omot says:
ဧပြီလ 20, 2019 မှာ 1: 04 ညနေ
ကိုယ့် androd app ကို software များကိုအသုံးပြုလိုပါလိမ့်မယ်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 13, 2018 မှာ 6: 38 ညနေ
Chongwe ဒံယလေက says:
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 11, 2018 မှာ 11: 38 နံနက်
ငါသည်ငါ့နဂါးငွေ့တန်း S1 အပေါ်ဒေါင်းလုဒ်မဆွဲနိုင်ပါတယ်အကူအညီလိုအပ်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2018 မှာ 12: 33 နံနက်
ဖွင့်လှစ် device ကို
ဇန်နဝါရီလ 19, 2018 မှာ 2: 31 နံနက်
နိုဝင်ဘာလ 20, 2017 မှာ 10: 07 ညနေ
ကျွန်တော်တစ်ဦး recycle bin ကို embed လုပ်ဖို့နိုင်ပါတယ် ??
ဇန်နဝါရီလ 12, 2018 မှာ 12: 24 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 7, 2017 မှာ 10: 34 ညနေ
အကြှနျုပျ၏အကောင်းဆုံး app ကို Instagram ကို
အောက်တိုဘာလ 5, 2017 မှာ 8: 07 နံနက်
ကလွယ်ကူအံ့သြစရာများနှင့်အံ့သြဖွယ်ဖိုင်မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။ ကသာဖိုင်မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်ဖိုင်တွဲအရွယ်အစားကိုပြအပေါင်းတို့နှင့်လိုအပ်ချက်များကို fullfill ကြောင်း
ဇူလိုင်လ 29, 2017 မှာ 11: 18 ညနေ
ကိုယ်ကဒီ apk တွင်စနစ်က file ကိုဖျောပွနိုငျငါ့ကိုပြန်ပြောပါ။
မတ်လ 9, 2017 မှာ 6: 00 ညနေ
အဆိုပါ apk downloded ။ ငါကသိပ်ကြိုက်တယ်။
စက်တင်ဘာလ 18, 2014 မှာ 4: 55 ညနေ
ယင်း၏တကယ်ကြောက်မက်ဘွယ် app နဲ့သုံးစွဲဖို့ဟုတ်ကဲ့အလွန်လွယ်ကူလူ ...
ဇွန်လ 30, 2019 မှာ 8: 15 ညနေ
စက်တင်ဘာလ 5, 2014 မှာ 10: 49 ညနေ
ဧပြီလ 17, 2014 မှာ 11: 52 နံနက်
မတ်လ 28, 2014 မှာ 11: 35 နံနက်
ငါဒီ site ကနေအများအပြား apps များ download လုပ်ထားသော🙂
ဂျိမ်း Ndaula says:
သြဂုတ်လ 10, 2014 မှာ 7: 29 နံနက်
ကိုယ့်ဟာ android နှင့်ဤဖိုင်မန်နေဂျာကြိုးစားပြီးသွားဘို့ apk file တွေကို download လုပ်။
မတ်လ 15, 2014 မှာ 3: 41 ညနေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 26, 2014 မှာ 3: 35 ညနေ
3.86Mb - ငါက Samsung Galaxy အတွက်ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါပွီ။ ဿုံအလုပ်လုပ်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 26, 2014 မှာ 3: 41 ညနေ
ငါပြဿနာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Block ကိုငါ့ device ကိုပေးထားတဲ့ defaults Play Store ကိုထက်အခြားသတင်းရင်းမြစ်များမှတပ်ဆင်ပြီး။ ဒီ option ကိုပိတ်ထားပါ - နဲ့ကောငျးသောအကငျြ့ကိုတပ်ဆင်ပါ။
နိုဝင်ဘာလ 30, 2013 မှာ 3: 33 နံနက်
မတ်လ 16, 2013 မှာ 6: 51 ညနေ
အလွန်အသုံးဝင်သော app ကို။